အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, LF / HF Reader ကို အိတ်ဆောင်ပွဲ Check-in ကိုစက်, Portable Event Sign Machine, Portable Time Attendance Machine, RFID Handheld တက်ရောက်စက်
ကုန်ပစ္စည်းမော်ဒယ်: RK406 series
စွမ်းအား: DC က 4.2V
ပါဝါစားသုံးမှု: 5W က
ပြသ: 160160 LCD display ကို×
မှတ်ဉာဏ်: 4M ကနည်းနည်း flash memory
ဒေတာကို retention ကိုကာလ: 50 နှစ်ပေါင်း
အများဆုံးစွမ်းရည်: 30,000 (အင်္ဂလိပ်) သို့မဟုတ် 13,000 (တရုတ်)
ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း: RS232 / 485, ထောက်ခံမှုကို TCP / IP protocol ကို
output format နဲ့: WG26 သို့မဟုတ် RS485 သို့မဟုတ် RS232
LED အရိပ်အယောင်: ပြာသော
ဆက်သွယ်ရေးဂီယာအကွာအဝေး: 1200 မီတာ (RS485)
Card ကိုစာဖတ်ခြင်းအမျိုးအစား: P ကိုစီးရီးလက်ကိုင်ဖိလိပ္ပု S50 / S70 / သဟဇာတကတ်များဖတ်ရှုနိုင်သည်; အီးစီးရီးလက်ကိုင်စံ EM ကတ်များနှင့်သဟဇာတကတ်များဖတ်ရှုနိုင်သည်; နှင့်ကတ်များနှင့် AWID ကတ်များ HID
Card ကိုစာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး: 5စင်တီမီတာ
အပူချိန်: -10℃ ~ + 60 ℃, 10%-90%
အလေးချိန်: 450 ဂရမ်
The RK406 series hand-held time attendance machine is mainly used for employee attendance, registration of large-scale public events, စသည်တို့ကို. Participation in large-scale activities requires registration of information of participating personnel, and the information is entered into the statistical system, and each participant's card or label, လက်ကောက်, and other tag are issued. This will ensure the safe and orderly organization of the participants. The hand-held sign-in machine records the participation of the participants and counts the number of participants at any time. The activities involving the competition can record the scores of the participants and are good assistants for large-scale events or competitions.
Handheld attendance machine is intuitive and easy to use. It has the characteristics of exquisite design, high sensitivity, တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို, powerful function and large storage capacity. It is the best choice for users. It utilizes the current non-contact RF smart card technology, and there is no risk of damage caused by hot plugging. It can be used for kindergartens, primary and secondary school students to swipe cards, factory and company staff shuttle buses, school attendance and other purposes.
Ringing can be set (အထိ 48 ringing)
It can be used in enterprises, kindergarten, ကျောင်းများ, စက်ရုံတွေ, ဆေးရုံများ, large public events and sports competitions, game, freely move the place where the checked in with hand-held attendance machine.
I am interested in your product RFID Handheld Attendance Machine, အိတ်ဆောင်တက်ရောက်စက်, အိတ်ဆောင်ပွဲ Check-in ကိုစက်
prev: RFID Handheld ဒေတာများကို Terminal နှင့်, RFID ဘားကုဒ်အိတ်ဆောင်ဒေတာများကို Terminal နှင့်
နောက်တစ်ခု: 134.2kHz Desktop ကိုတိရိစ္ဆာန် Tag ကိုထုတ်ပြန်သူ, ISO11784 / 11785, FDX-A / FDX-B ကပရိုတိုကောတိရိစ္ဆာန် Tag ကို Reader ကို
IC / CPU ကိုကဒ်အခမဲ့ Wired လီမိတက်အချိန်လီမိတက် Times က Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Module